PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-05-21 - Uhabula kwabadala owelezokuphepha
Uhabula kwabadala owelezokuphepha
KUYAMKHATHAZA ukubona intsha engontanga yakhe ibhizi nezinto zobukhazikhazi nobumnandi esikhundleni sokuzihlupha ngamathuba okuthuthukisa impilo yayo. Lokhu kuvezwe ngusomabhizinisi osemncane kodwa owenza okumangalisayo uMnuz Gregory Sandile Dladla(28) waseKlaarwater, eMariannhill, ongumnikazi wenkampani Amaviyo Armour and Safety eseWestmead ePinetown.
Le nkampani yenza izimpahla zabasebenzi ikakhulukazi ezokuzivikela. UDladla obambisene nenkampani iCalvin and Family Group kuleli bhizinisi uthe ukuze aphumelele usizwa ukuhlala nabantu abadala kunaye abamhabulisayo ngempilo.
Uzichaze njengomuntu ophansi ongathandi ukukhuluma nokudala ukuthi abanye bacabange ukuthi uyazitshela. Uthe isikhathi esiningi uyazithulela adle amathambo engqondo acabanga ngamasu amasha okuthuthuka empilweni.
UDladla uqale imfundo yakhe emabangeni aphansi eKlaarwater Primary , wadlulela ePhakathi Senior Secondary waphothula u-matric eMargot Fonteyn High School ngo-2007. Emva kwalokho ngo-2008 waya eDurban University Of Technology (DUT) lapho kade enza izifundo zeFashion and Textile aziphothule ngo 2010.
Uthe uhambo lwakhe lokuzama ukuqala ibhizinisi alukaze lube lula neze njengoba amabhange neminyango kahulumeni babengafuni ukumnika imali.
“Ibhizinisi yinto edinga isibindi, ngiyabathanda ontanga yethu, kodwa uma ngifuna izeluleko ngiya kubantu abadala engihlala nabo bangidodise ngakho konke empilweni,’’ kusho uDladla.
Uthe useke waba nabo abangani abangangaye, kodwa washeshe wabaxwaya ngoba wabona ukuthi uzokwenza amaphutha amaningi empilweni bese kuhliphizeka iphupho lakhe lokuba omunye wosomabhizinisi abahlonishwayo kuleli.
“Abangani abangontanga yami, bacishe bangifaka ehlathini ngaphuma kudala kubona ngoba into elimaza kakhulu sithanda ukuthi abantu basibone njengabantu abaphila kamnandi sihubha izinto ezingeke zisisize ngalutho. Abanye bayethuka uma bengibona ngihleli nabantu abadala, ngiyazi ukuthi indlela ibuzwa kwabaphambili,’’ kusho uDladla.
Uthi umkhuba wokupheka ethulula izintombi akawungeni, ngoba isikhathi akanaso sokwenza yonke leyo nto. Nakuba emncane kodwa, uthe unamaphupho amakhulu ngempilo njengoba efisa ukubona inkampani yakhe iqasha inqwaba yabantu.
“Ngithanda ukwenza into ehlomulisa abantu abaningi ikakhulukazi abamnyama ngoba basele emuva ezintweni eziningi.
“Sinecebo lokudala amathuba emisebenzi amaningi. Okungikhathazayo ukubona intsha ibhizi nobukhazikhazi izenza abanemali kanti kufanele sibhukule sizame impilo,’’ kusho uDladla.
Udalule ukuthi waqala esebenzela izinkampani zabanye abantu eHolmes Brothers, iBlack Hawk, Imperial Armour neLeo Garments kodwa ngoba wayenephupho elikhulu, wabona kufanele ukuthi aziqalele okwakhe. Uthe into eyayimgqgugquzela ukuthi wayezitshelile ukuthi akafuni ukusebenzela umuntu isikhathi eside empilweni yakhe.
Uthe iseluleko angasinika abantu abasha bakuleli, ukuthi ubunye bungamandla kufanele abanolwazi becobelele abanye ukuze baphumulele ngoba intsha iyikusasa lezwe.
“Ngaqala ngezimpahla zokugqoka ngaba nelebuli yami iGreg Code ngabona ukuthi akuhambi kahle abantu bakuleli abayilungele imfashini ngayiyeka.
“Ngahlangana noCalvin okunguyena owangicebisa kokuningi njengoba ngilapha namuhla,” kusho uDladla.
Uthe ukuba nenkampani akuwona umlingo njengoba kunezingqinamba ezikhona kodwa lokho akumqedanga amandla ngoba wayazi ukuthi ufuna ukuyaphi nempilo yakhe. Ukhale kakhulu nangemikhiqizo engena kuleli isuka kwamanye amazwe wathi yiyona ekhinyabeza amabhizinisi amancane kuleli.
“Uhulumeni uma engase ethembele kithina konke kungahamba kahle, ngikholwa ukuthi kufanele sinciphise ekuthembeleni kwamanye amazwe sizenzele okwethu ukuze siye phambili. Umnotho wethu kufanele ukhuliswe yithi sizibambele,” kusho uDladla. Uthe kubalulekile ukuthi noma ngabe unawo umqondo webhizinisi, kodwa imfundo kufanele kuqalwe ngayo ukuze umuntu abe nolwazi olujulile entweni asuke efuna ukuyenza.
“Abantu abangabi novalo abasuke belandele amaphupho abo bangakwesabi ukwehluleka ngoba uma uzimisele ayikho into engakwehlula. Izingqinamba ziba khona endleleni kodwa uma uphokophele phambili uyaphumelela.”
Uthe njengoba ephethe inkampani akakuthandi ukuziphakamisa nokubukela abanye abantu phansi. Le nsizwa ekhombisa ukukhalipha ithe ayithandi uma abantu behleli nayo bazizwe sengathi bahleli nesikhulu ngoba iyazifanele nabantu bonke futhi ayibukhonzile ubukhazikhazi.
“Abasebenzi bami angifuni bangithathe njengesilwane. Yebo ngiyawushaya umthetho kodwa ngithanda bezizwe besekhaya ngaso sonke isikhathi uma besemagcekeni asemsebenzini,” kusho uDladla.
Uthe njengoba enabasebenzi abangaphezu kuka- 27 ufisa ukubona lesi sibalo siphindeka kaningi ukuze abone ukuthi uwenzile umehluko emphakathini.
“Sineqhinga lokudala amathuba emisebenzi angaphezu kuka-5 000 siqashe abantu ukuze baxoshe ikati eziko. Elinye iphupho esinalo ukuthi sigcine sisabalele senze neminye imisebenzi eyehlukile kulokhu esikwenza manje,” kusho uDladla.